Fanomezana krismasy: tranga sy kitendry Air iPad | Vaovao IPhone
Fanomezana Krismasy: Trangam-piarakodia sy kitendry iPad Air
Vaovao IPad | | iPad, iPad Air
Avy amin'ny iPad Actualidad isika fanolorana fanomezana ho an'ity Noely ity mifandraika amin'ny iPad amin'ny endriny samihafa. Ny iPads dia manana sanda mitombo ho anay, tsy amin'ny lafiny toekarena ihany, noho izany ny lahatsoratra izay asehonay anao amin'ny lahatsoratra natokanay ho an'ny fanomezana Krismasy dia manana kalitao.
Raha mieritreritra ny hiaro ny iPad-nao ianao dia ampio kitendry, fakantsary fanaraha-maso, GPS ivelany…. Azo antoka fa marina ny filazanay anao.
Atolotray eto fonony sy kitendry isan-karazany miaraka amin'ireo tranga natokana ho an'ny iPad Air.
1 Tucano - Raharaha Hard Folio
2 Targus - VERSASU iPad Air Rotating Case Stand
3 Apple - iPad Air Smart Case
4 Apple - Cover Air Smart iPad
5 Belkin - Case FormFit ho an'ny iPad Air
6 Folio Keyboard Logitech Ultrathin
7 Kesington - KeyFolio misy fitendry
8 Belkin - QODE Ultimate Keyboard Case
Tucano - Raharaha Hard Folio
Tranga plastika mafy izay miaro ny aloha sy ny aorian'ny iPad Air. Ny bokotra sy ny fifandraisana dia navotsotra tsy ho voaro amin'ny fidirana haingana. Miaraka amin'ny hetsika tokana azontsika atao miovaova ny toeran'ny fitaovantsika mijery sarimihetsika na manoratra lahatsoratra.
Targus - VERSASU iPad Air Rotating Case Stand
Satroka atsofoka ary mijoroa amin'ny iPad Air. ny Swivel sleeve dia mamela anao hihodina ny diplaoma iPad 360 ao anatin'ilay tranga mba hankafizanao ny zoro fijerintsika ilaintsika, na sary na sary. Ny akorandriaka dia miaro ny aloha, ny aoriana ary ny sisiny, amin'ny fikasihan-tanana malefaka.
Apple - iPad Air Smart Case
Ny Apple Smart Case dia miaro ny eo aloha sy ao aoriana amin'ny fitaovantsika, na dia kely aza mampitombo ny hatevin'ny napetraka. Izy io dia vita amin'ny hoditra vita amin'ny loko aniline premium ary misy loko enina samihafa. Sokafy ny fonony dia vonona hampiasa ilay fitaovana. Rehefa vita ianao dia akatony ary hatory ny iPad. Vidiny: 79 euro.
Apple - Cover Air Smart iPad
Ny fiarovana Smart Cover aloha dia manify tahaka ny matanjaka. Izy io dia miaro ny efijery fotsiny nefa tsy manarona ny fonenana aluminium, hankafizanao ny fanamboarana ny fitaovana. Ny fonony dia vita amin'ny polyurethane ivelany, ary ny ao anatiny dia lalaon'ny lalao microfiber malefaka mitazona ny efijery tahaka ny tamin'ny andro voalohany. Toy ny Smart Case, sokafy ny fonony ary vonona hampiasa ilay fitaovana. Rehefa vita ianao dia akatony ary hatory ny iPad. Vidiny: 39 euro.
Belkin - Case FormFit ho an'ny iPad Air
Ny tanany Belkin dia manome fiarovana azo itokisana miaraka amin'ny endrika bika. Ny fonony dia vita amin'ny fitaovana mateza izay tena malefaka ny mikasika azy. Mamelatra manodidina ny endrik'ilay iPad Air ho an'ny malina sy malefaka. Ny firakotra anatiny dia manana endrika toy ny landy, miaro ny efijery. Azo aforitra midina amin'ny zoro ambany sy ergonomika izy io mba hanamaivanana ny tsindry amin'ny tanana rehefa manoratra. Izy io koa dia manana hidin-trano fiarovana mba hisorohana ny fisokafan'ny fitaovantsika rehefa itaterantsika azy io.
Folio Keyboard Logitech Ultrathin
Logitech, manam-pahaizana manokana amin'ny klavier ho an'ny iDevices, dia manolotra tranga fitendry. Ny lanjany dia milanja 425 grama sy hatevin'ny 2 cm. Na eo aza ireo refy kely ireo ny haben'ny fanalahidy dia namboarina tsara indrindra manolotra sehatra fanoratana lehibe kokoa. Ny tranga dia mamela antsika hametraka ny iPad Air amin'ny toerana roa samy hafa. Vidiny: 99 euro.
Kesington - KeyFolio misy fitendry
Ity fonony ity dia vita amin'ny hoditry ny ondry, izay mampita fahatsapana fahamendrehana tena mahafinaritra. Ny keyboard dia porofo tsy misy rano ary natao ho an'ny olona tsy mitandrina. Ny fizakantenany dia mamela antsika hampiasa maharitra 90 ora ary hatramin'ny 200 ora fiandrasana. Vidiny: 79 euro.
Belkin - QODE Ultimate Keyboard Case
Ho ahy dia ny fitendry kanto indrindra rehetra satria vita amin'ny aliminioma izy io. Ny famolavolana sober dia mamela antsika hametraka ny efijery amin'ny lafiny samihafa hiara-miasa. Ny bateria dia ahafahantsika mampiasa azy mandritra ny 164 ora na enim-bolana amin'ny fiandrasana. Tsy mbola azo amidy any Espana io fa ho avy tsy ho ela.
Fanazavana fanampiny - Fanomezana ho an'ny Noely: Fitaovana
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » iPad » iPad Air » Fanomezana Krismasy: Trangam-piarakodia sy kitendry iPad Air
Carlos Pascual dia hoy izy:
Ny hany sarobidy dia ny paoma, ny solosaina ary ny fitendry. Ny ambiny dia tsy mendrika. Tsy mahazo aina izy ireo ary tena tsy mandeha amin'ny laoniny.
Valiny tamin'i Carlos Pascual
Misy mahalala ve rehefa hamidy ny tranga farany belkin qode miaraka amin'ny keyboard espaniola? Ny tiako holazaina dia izay misy ny litera ñ
Mamaly an'i raul
Izay hoentin'ny Bluetooth 4.1 vaovao antsika
Fanomezana ho an'ity Krismasy ity: Fitaovana ho an'ny iPhone-nao